सरकारकाे कदममा नै फुटबल खेलाडीले विराेध गर्नुपर्ने अवस्था किन आयाे ? | | Neplays.com
सरकारकाे कदममा नै फुटबल खेलाडीले विराेध गर्नुपर्ने अवस्था किन आयाे ?
By Neplays	 Last updated Oct 14, 2020
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले देशब्यापी लकडाउन घोषणा गरेपछि चैत यता देशको खेलकुद गतिविधि ठप्प छ । खेलकुद जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रशिक्षण सहित रोकिएको ७ महिनाभन्दा लामो समय भयो ।
सरकारले लकडाउन खुकुलो र पछि खुल्ला नै गर्दा दैनिक गतिविधि सामान्य भइसकेको छ । तर खेल गतिविधिमा अझै निषेध कायमै छ । खेलकुदको प्रशिक्षण समेत गर्न नपाउने गरी जिल्ला प्रशासनले आदेश जारी गरेको छ ।
लामो समयदेखि खेल गतिविधि बन्द हुँदा खेलाडीको प्रदर्शन क्षमतामा दीर्घकालीन असर पर्नेमा खेल बिज्ञहरुले सुरुदेखि नै आवाज उठाइरहेका हुन् । खेलकुदको सरोकारवाला निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र खेलकुद मन्त्रालयले यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेका छैनन् । राखेप सदस्यसचिव रमेश सिलवालले अहिलेको परिस्थितिमा सरकारी निर्णय उल्लंघन गर्न नमिल्ले बताउँदै आएका छन् ।
लामो समयदेखि प्रशिक्षण समेत गर्न नपाउँदा अब चाहीं खेलाडीहरु नै बोल्न बाध्य भएका छन् । राष्ट्रिय फुटबल टोलीका गोलरक्षक किरण चेम्जोङले त खुल्लापत्र नै लेखेर प्रशिक्षण सुरु गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी स्टार स्ट्राइकर सावित्रा भन्डारीले पनि यस्तै प्रकृतिको माग गरी सामाजिक सन्जालमा लेखेकी छिन् ।
खेलकुद विज्ञहरुले पनि लामो समय खेलाडीलाई मुख्य खेल गतिविधिबाट टाढा राख्दा उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुग्ने बताउँदै आएका छन् । राखेपका एथलेटिक का पूर्व प्रशिक्षक सुशील नरसिंह राणा ले घरमै गरिने फिटनेसले खेलाडीको समग्र स्तर जोगाइराख्न नसकिने बताउँछन् ।
खेलाडीले आफ्नो खेलस्तर कायम राख्न प्रशिक्षण एक दिन पनि रोकिन नहुने विज्ञहरुको धारणा छ । तर सात महिनासम्म खेलमैदान टेक्न नपाएका खेलाडीलाई आफ्नो लय फिर्ता ल्याउन धेरै समय लाग्नेछ ।
कोरोना महामारीले नेपालमा मात्र होइन विश्वभर नै नकारात्मक असर परेको छ । कोरोनाले धेरै असर परेको युरोप र अमेरिकामा विस्तारै खेल गतिविधि पनि सामान्य अवस्थातर्फ उन्मुख छ । युरोमा घरेलु फुटबल गतिविधि, ग्रान्डस्लाम टेनिस प्रतियगिता, बास्केटबल प्रतियोगता सुरु भइसकेको छ । नेपालमा भने प्रशिक्षण पनि रोक लगाइएको छ ।
यसो भन्दैमा नेपालमा खेलकुद गतिविधि सामान्य अवस्थामा ल्याउनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । कोरोना संक्रमितको दर हेर्ने हो भने नेपालमा कोरोना महामारी भर्खरै सुरु भएको छ । नेपालमा अहिले चार देखि पांच हजार संक्रमित दैनिक थपिरहेका छन् । अहिले खेल गतिविधि सुरु गर्न सम्भव नहोला तर अन्तरष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा रहेका खेलाडीहरूको प्रशिक्षण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सुरु गर्न ढिला भइसकेको छ ।
जापानको टोकियोमा अर्को वर्ष साउनमा ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक हुँदैछ । ओलम्पिकका लागि छनोट प्रतियोगिताको लागि नेपालबाट ७ खेलका १२ खेलाडी छानिएका छन् । उनीहरूले प्रशिक्षण सुरु गर्न नपाएको लामो समय हुँदा उनीहरूको स्तर खस्किएको छ । पुरानै लयमा फर्कन लाग्ने समय कुर्दा ओलम्पिक सकिसकेको हुनेछ ।
नेपाली फुटबल टोलीले विश्वकप छनोट अन्तर्गतका खेलहरु सन् २०२१ को सुरुदेखि नै हुने सम्भावना छ । अहिलेसम्म प्रशिक्षण सुरु नहुँदा अष्ट्रेलिया र जोर्डन लगायतका टोलीसँग प्रतिस्पर्धा सुरु गर्ने क्षमता कस्तो हुने हो त्यो चिन्ता को विषय हो ।
आखिर खेलाडीले नै सरकार र आफ्नो सर्वोच्व निकायविरुद्ध खुलेर नै विरोध गुर्न पक्कैपनि खेलकुद क्षेत्रका लागि नराम्रो धक्का हो । किनकी अरु क्षेत्रहरु खुल्दा खेलकुद क्षेत्रलाई किन यसरी अन्धकारतर्फ धकेलिरहेको छ अझै अन्योलमा छ ।
१३ खेलाडी आइसोलेसनमा तर नापोलीमाथि शानदार विजय
टोटनह्यामको जितमा डेब्यू खेलाडी भिनिसियसको प्रेरणादायी प्रदर्शन
हारका बाबजुद सेल्टिकका प्रशिक्षकले गरे टिमको प्रशंसा
युराेपा लिगमा आर्सनलकाे संघर्षपुर्ण जित
युराेपा लिगमा लिभरकुसेनकाे फराकिलाे जित, नापाेली भने पराजित